ထပ်ကိန်းများနှင့် ကိန်းရင်းများကို ဇယားဖြင့် ရှာယူခြင်း ထပ်ကိန်းများနှင့် ကိန်းရင်းများကို တွက်နည်းရိုးရိုးဖြင့်ရှာယူ လျှင် အချိန်အလွန်ကုန်သည်။ သို့သော် လော့ဂရစ်သမ်နည်းဖြင့် အချိန်မ ကုန်ဘဲ အလွယ်တကူပင် တွက်ချက်ရရှိနိုင်သည်။ ဥဒါဟရုဏ်အားဖြင့် ၁၉၃ ၏တန်ဖိုးကိုရှာလိုသော် လော့ဂရစ်သမ်နည်းဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းတွက်ပါ။ လော့ ၁၉(ဝါ ၁၉ ၏ လော့ဂရစ်သမ်) Ó ၁. ၂၇၈၈ ။ ၁. ၂၇၈၈ ဟူသော လော့ဂရစ်သမ်ကို ၃နှင့်မြေ|ာက်လဒ်သည် ပေးထားသော သုံးထပ်ကိန်း၏ လော့ဂရစ်သမ်ဖြစ်သည်။ မြေ|ာက်လဒ် ၃. ၈၃၆၄ ကို အင်တီ လော့ဂရစ်သမ် ဇယားတွင်ကြည့်သော် ယင်း၏တန်ဖိုးမှာ ၆၈၆၁ ဖြစ်ကြောင်းကို သိရသည်။ အတိုအားဖြင့် လော့ ၁၉၃ Ó ၁. ၂၇၈၈ Ö ၃ Ó ၃. ၈၃၆၄။ အင်တီလော့ဇယားတွင် . ၈၃၆၄ ၏တန်ဖိုးကိုကြည့်၍ ရရှိသော ၆. ၈၆၁ ကို ၁ဝ၃ (ဝါ ၁ဝဝဝ )နှင့်မြေ|ာက်ပါ။ လော့နှင့် အင်တီလော့ ဇယားနှစ်ခု လုံးတွင် ခုဂဏန်းများနှင့် ယင်းတို့ထက်ငယ်သော ဒဿမဂဏန်းများသာရှိ ကြောင်းကို အမြဲသတိပြုပါ။ အထက်ပါနည်းကို ထပ်ကိန်းလက္ခဏာများဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပါအံ့။ ၁၉ Ó ၁ဝÖ ၁. ၉ Ó ၁ဝ၁Ö ၁ဝဝ.၂ရ၈၈ Ó ၁ဝ၁. ၂ရ၈၈ အကျဉ်းအားဖြင့် ၁၉ Ó ၁ဝ၁. ၂ရ၈၈ ထို့ကြောင့် ၁၉၃ Ó ( ၁ဝ၁. ၂ရ၈၈ )၃ Ó ၁ဝ၂ရ၈၈Ö၃ Ó ၁ဝ၃. ၈၃၆၄ ထို့ကြောင့် ၃. ၈၃၆၄ သည် ၁၉၃ ၏လော့ဂရစ်သမ်ဖြစ်သည်။ (လော့ဂရစ်သမ်ဆိုသည်မှာ အထပ်ညွှန်းဂဏန်းဖြစ်သည်ကို အမြဲသတိပြုပါ။) ပုစ္ဆာ။ ။ ၃၃၇၅ ၏ သုံးထပ်ကိန်းရင်းကိုရှာပါ။ ၃၃၇၅ ၏ လော့ဂရစ်သမ်သည် ၃. ၅၂၈၂ဖြစ်၍ ဤဂဏန်းကို ၃ ဖြင့်စားသောအခါ သုံးထပ်ကိန်းရင်း၏ လော့ဂရစ်သမ်ဖြစ်သော (၁. ၁၇၆၁) ကို ရသည်။ ဤဂဏန်း၏တန်ဖိုးသည် အင်တီ လော့ဂရစ်သမ် ဇယားတွင် ၁၅ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၃ ၃၃၇၅ ၏ အဖြေသည် ၁၅ ဖြစ်သည်။ အထပ်ညွှန်းဂဏန်း ဥပဒေများနှင့် ထပ်ကိန်းတို့ဖြင့်ရှင်းလင်းသော် အောက် ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၃ ၃၃၇၅ = ၃၃၅၇၁/၃ ။ လော့ ၃၃၇၅ Ó လော့ (၁ဝဝဝÖ၃. ၃၇၅)Ó ၃×ဝ.၅၂၈၂ (ဇယားမှ ရသည်။) ထိုကြောင့် ၃၃၇၅ Ó ( ၁ဝ၃. ၅၂၈၂ ) ( ထပ်ကိန်းသဘောအရ ဖြစ်သည်။ ) ထိုကြောင့် ၃ ၃၃၇၅ Ó ၃၃၇၅ ၁/၃ Ó(၁ဝ၃. ၅၂၈၂)၁/၃ Ó ၁ဝ၁. ၁ရ၆၁ ထိုကြောင့် ၁. ၁၇၆၁ သည် ၃ ၃၃၃၇၅ ၏ လော့ဂရစ်သမ်ဖြစ်သည်။ ၁ ကို ခေတ္တချန်၍ . ၁၇၆၁ ၏တန်ဖိုးကို အင်တီလော့ဇယားတွင်ကြည့်ပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လော့ဂရစ်သမ်&oldid=703047" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။